benifits Archives - Khabar Japan - News in Nepali
तपाई यहा हुनुहुन्छ » ख़बर जापान / benifits
प्रेम सम्बन्ध टुट्दा फाइदै फाइदा
Tags: benifits, breakinlove, in-odd, love, lovers
खबरडेस्क, १५ चैत । जीवनमा प्रेममा पर्ने र प्रेममा विछोडिने कथा धेरैसँग हुन्छ । अधिकाँश मानिस प्रेम सम्बन्ध टुटेपछि विक्षिप्त हुन्छन् । यदि तपाइँ पनि यस्तो अनुभव गर्नु भएको छ भने तपाइँका लागि खुसीको खवर छ । विश्लेषकहरुले ब्रेकअप जीवनको… बाँकी अंश »
मीठो आँपका फाइदाहरु के-के छन्
Tags: benifits, featured, fruits, healthbenifits, healthtips, summerfruits, sweetmango
खबरडेक्स,१८ फागुन । गर्मीमा आँपको लहर नै आउँछ । सबैलाई मनपर्ने यो फल स्वादिलो पनि उत्तिकै छ । त्यसैले त यसलाई फलको राजा पनि भनिन्छ । अहिले विभिन्न किसिमका आँपहरू बजारमा उपलब्ध छन् । जसका विशेषता अनुसार, स्वाद पनि फरक… बाँकी अंश »
मूलाका १० फाईदा के-के छन् ?
Tags: benifits, featured, health, healthtips, radish
खबरडेस्क १७ फागुन । काठमाडौँ । हामीहरु कतिपय मूलालाई सस्तो तरकारीको रुपमा हेंला गछौं । तर, मूला हाम्रो स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायी हुन्छ । आउनुहोस् जानौं मूलाले हाम्रो स्वास्थ्यमा पार्ने फाइदा : १. मसल्स बनाउन : यदि मसल्स बनाउने इच्छा… बाँकी अंश »
स्वास्थ्य शिविरबाट ४१३ जना लाभान्वित
Tags: alert-news, beni, benifits, healthbenifits, healthcamp, myagdi, narchyang
म्याग्दी, १३ फागुन । म्याग्दीको नारच्याङमा सम्पन्न आँखा उपचार र स्त्री रोग शिविरमा ४१३ जना लाभान्वित भएका छन् । लायन्स क्लब अफ पोखरा आगन, सङ्गम, लेकसिटीको संयुक्त आयोजना तथा मणिपाल शिक्षण अस्पताल र हिमालयन आँखा अस्पताल पोखराको प्राविधिक सहयोगमा दुई… बाँकी अंश »
Tags: benifits, health, healthbenifits, in-odd, lwang
खबरडेस्क ६ फागुन । ल्याङ उपयोग स्वादका लागि उपयुक्त मसला मानिन्छ। यसका साथसाथै यसका अनेक गुणहरू पनि रहेका छन्। यसको उपयोग एन्टीसेप्टिकका रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। यसमा हाम्रो स्वास्थ्यलाई दुरुस्त राख्ने अनेक गुणहरू रहेका हुन्छन्। ल्वाङमा विशेषतः एक प्रकारको तत्व… बाँकी अंश »
दैनिक कति पानी पिउनु उपयुक्त हुन्छ ?
Tags: alert-news, benifits, daily, drinkingwater, health
खबरडेक्स,२६ माघ । दैनिक कति पानी पिउनु उपयुक्त हुन्छ ? पानी पिउने मानिस कुन ठाउँमा बसेको छ त्यसअनुसार पानी पिउनुपर्छ । पहाड तथा काठमाडौंमा बस्नेहरूले दैनिक दुई लिटर पानी पिउनु उत्तम हो भने तराईमा बस्नेहरूले तीन लिटरसम्म पानी पिउनुपर्छ ।… बाँकी अंश »
काउली खानाको फाईदाहरु
Tags: alert-news, benifits, cauliflower, healthbenifits
खबरडेक्स,१४ माघ । विषादी रहित काउलीलाई तरकारीको रुपमा राम्रो मान्ने गरिन्छ। यो जति स्वादिलो हुन्छ त्यति नै यसका फाइदाजनक गुणहरू पनि छन्। यसमा भिटामिन सी, के, फाइबर तथा भिटामिन ‘बी’ का साथसाथै अनेक प्रकारका तत्वहरू पाउन सकिन्छ। साथै यसमा पोटासियम,… बाँकी अंश »
झोलुङ्गेपुलले स्थानीयबासिन्दा लाभान्वित
Tags: alert-news, benifits, locals, salleri, solukhumbu, suspension-bridges
सल्लेरी (सोलुुखुम्बु), ६ माघ । लामो समयको अन्तरालपछि सोलुखुम्बुको मुक्ली र नेले गाविसको सिमानामा पर्ने सिकुखोलाको झोलुङ्गेपुल निर्माण भएपछि स्थानीयबासिन्दा लाभान्वित भएका छन् । पटक–पटक वर्षामा आउने पहिरोका कारण लामो समयसम्म निर्माण हुन नसकेको झोलङ्गेपुल जिविसको २०७०÷७१ को बजेटअन्तर्गत करिब… बाँकी अंश »